Anobatsira matipi e "jimunasitikisi" yepfungwa 2nd chikamu: Lumosity - Cognitive Kudzidziswa
Kuenderera mberi nekudzokorora kwe pfuma for the neurocognitive kugadziriswa uye yekudzidziswa kwe mabasa makuru, pane kunyorera inobatsira zvikuru iyo inogona kuiswa pane smartphone kana piritsi. Nekudaro, kana iwo masosi ari mazhinji emahara, izvi zvinoshandiswa kazhinji zvinouya nemari.
Imwe yekushandisa kwakadai ndeye Kuchema. Inotakurika kumafoni efoni uye mapiritsi, ine zviwanikwa zvakawanda zvakapatsanurwa nenzvimbo dzekufarira:
3) Dambudziko Kugadzirisa
7) Math (masvomhu)
Kwenzvimbo yega yega pane anopfuura mashanu mitambo iriko. Pano, tinotaura mutambo wenzvimbo imwe neimwe yakakanganiswa:
Ndangariro dzinoshanda (ndangariro) = Icho chiri gioco di memory kwaunofanirwa kubatsira mutasvi wehotera kuunza nhamba chaiyo masutukesi kuvaenzi. Rangarira iyo chaiyo masutukesi anowanikwa mukati mekusimudza uye upe iyo chaiyo nhamba kune vatengi. Mumutambo uyu, ndangariro inodzidziswa pamwe nekudzivirira uye inogona kushandiswa kurwisa mafungiro ekukurumidza.
Chitima chekufunga (kutarisa) = Mumutambo uyu chinangwa ndechekuti chitima chimwe nechimwe chiende kunzvimbo chaiyo inoenderana. Iwe unofanirwa kutsausa nzira yemakwara panzvimbo dzakatarwa pamepu kuti uchinje nzira yechitima chimwe nechimwe uye uchitungamire kuchiteshi chevara rimwe chete. Mutambo uyu pasina mubvunzo unoshanda kudzidzisa kutarisisa, asi zvakare kuronga sezvaunofanirwa kukurumidza kutarisa kwaienda kwechitima chimwe nechimwe uye kuronga nzira kwayo.
Pirate Passage (kunetsekana) = Chinangwa chemutambo uyu kutora ngarava yepirate kune pfuma. Iwe unofanirwa kutsvaga ipfupi nzira uye dzivisa kurovera nedzimwe ngarava. Uyu mutambo unogona kuve unobatsira mukugadzirisa matambudziko uye zvimwe, senge manejimendi manejimendi uye kuronga.
Ebb uye Kuyerera (kushanduka) = mumutambo uyu pane mashizha ari kuyangarara pamusoro penzira yemvura. Chinangwa ndechekutsvaira munwe wako munzira iyo mashizha ari kufamba kana ari yero uye swipe munzira inoratidzwa netipi yemashizha kana mashizha ari egirini.
Njodzi dzeMugwagwa mukuru (kumhanya) = Imakwikwi emota mauri maunofanirwa kudzivirira kurovera nedzimwe mota, asi zvakare zvimwe zvipingamupinyi. Zvimwe zvipingamupinyi zvinotarisirwa nemufananidzo wakaiswa kumusoro kurudyi kwemasekondi mashoma. Kana iwe uri wakanaka panguva yemutambo musangano, iyo nguva yekuratidzira yeiyi chipinganidzo chekutanga ichaderera. Uyu mutambo wakakodzera kushanda pakumhanyisa kumhanyisa, asi zvakare pakuchengeta kwakasimba
Madonhwe emvura (math) = Mumutambo uyu mukati memadonhwe emvura pane mashandiro emasvomhu uye pasi pechidzitiro pane diki keyboard iyo inoshandiswa kunyora mhedzisiro. Chinangwa ndechekugadzirisa mashandiro mazhinji sezvinobvira munguva pfupi. Kana madonhwe akarova pasi, iwo mwero wemvura unokwira uye ucharasika. Iko hakuna timer mumutambo uyu, zvinongoverengera kugadzirisa kwakawanda mashandiro sezvinobvira.
Zvese i mitambo vane imwe graphic chaizvo kunakidza izvo zvinogona kukwezva vese vadiki, asiwo vana nevakuru. Pakupera kwechikamu chega chega iwe une mamakisi anozove chikamu chepamusoro uye izvi zvinogona kubatsira kuchengetedza fambiro mberi yako. Chikamu chega chega chemutambo (chemitambo mizhinji) chinotora yakakwira maminetsi maviri. Iko kuoma kwemutambo wega wega kunoenzanisirwa zvinoenderana nekuita kwemutambi uye kuoma kwacho kunowedzera sezvo nhanho dzemitambo dzichienderera mberi.
Nekudaro, Lumosity zvakare ine vanamwari kuremara; kutanga iwe unofanirwa kubhadhara a chipeto iyo inogona kuve yakakamurwa kuita pamwedzi kana pagore ($ 14.95 pamwedzi kana $ 83 yegore). Zvakare, sekune CognitiveFun, iko kunyorera kuri Chirungu, asi tsananguro dzemitambo dziri nyore nemitsara mipfupi uye mazwi ekutaurirana. Kunyange mitambo yemitauro ichifadza, inongowanikwa muChirungu.
Apps, Executive mabasa, neuropsychology, hunyanzvi hutsva
Anobatsira matipi eiyo "jimunasitikisi" yepfungwa 2nd chikamu: Lumosity2021-04-102021-04-10http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/04/whatsapp-image-2021-04-10-at-23.33.02.jpeg200px200px
Chiito chemwana chinotova nemitemo yekutaurirana kwevakurumutauro